Nhau - Zvakajairwa kukanganisa uye kugadzirisa kwekatoni compression muchina
Carton compression muchina zvikanganiso zvakajairika uye nzira dzekugadzirisa matambudziko: kutadza kwemuchina wekuyedza, kunowanzo kuratidzwa mukombuta yekuratidzira, asi kwete hazvo software uye kukanganisa komputa, iwe unofanirwa kunyatso ongorora, teerera kune zvese zvakadzama, kuitira kugadzirisa kwekupedzisira kupa ruzivo rwakawanda se zvinogoneka.
Nzira dzinotevera dzekugadzirisa dambudziko dzinofanirwa kuitwa munhevedzano:
Software kazhinji inokanganisa:
Kukundikana kwekombiyuta hardware.Ndapota gadzirisa kombiyuta maererano nemirairo yemugadziri.Kutadza kweSoftware, bata mugadziri.Kana mamiriro aya akaitika panguva yekushanda kwefaira.Paita chikanganiso mukushanda kwefaira.Paita dambudziko nefaira rabviswa.Tarisa kune akakodzera gwaro rekushandisa mirairo muchitsauko chimwe nechimwe.
2. test force zero inoratidza kuvhiringika:
Tarisa uone kana waya yepasi (dzimwe nguva isiri) yakaiswa nemugadziri panguva yedebugging yakavimbika.Mhoteredzo yachinja zvikuru.Muchina wekuyedza unofanirwa kushanda munharaunda pasina kukanganiswa kuri pachena kwemagetsi.Tembiricha nehunyoro hwenzvimbo inodiwawo.Ndapota tarisa kune bhuku rekugadzirisa.
3. simba rekuedza rinongoratidza hukuru:
Gadzirisa kana bhatani radzvanywa.Tarisa zvakabatana.Tarisa uone kana iyo AD kadhi yekumisikidza mune Options yakashandurwa.Amplifier yakakuvadzwa, yekubata mugadziri.
4. faira rakachengetwa hariwanikwi:
Iyo software ine yakagadziriswa default faira yekuwedzera nekukasira, kana yekupinda imwe yekuwedzera paunenge uchichengeta.Kana dhairekitori rakachengetwa rachinja.
5. Iyo software haigone kutangwa:
Tarisa uone kana software dongle yakaiswa pakombuta parallel port.Vhara mamwe mapurogiramu epurogiramu uye wotangazve ivo.Iyo system file yeiyi software yakarasika uye inofanirwa kudzorerwa.Iyo system file yesoftware iyi yakakuvadzwa uye inofanirwa kudzoserwa.Bata mugadziri.
6. Printer haidhindi:
Tarisa mirairo yeprinta kuti uone kana kushanda kuri kwechokwadi.Kana printer chaiyo yasarudzwa.
7. imwe, inogona kubata vanogadzira chero nguva, uye ita rekodhi yakanaka.
Carton compression muchina rudzi rutsva rwechiridzwa chinotsvagirwa uye kugadziridzwa zvinoenderana neiyo yenyika chiyero.Chiridzwa chacho chinonyanya kuve nemabasa matatu: compressive simba bvunzo, stacking simba bvunzo uye pressure standard test.Chiridzwa chinotora kunze kwenyika servo mota uye mutyairi, hombe LCD touch display screen, high-precision sensor, single-chip computer, printer uye zvimwe zvepamba nekune dzimwe nyika zvemberi, zvine kukurumidza kumhanya mutemo, nyore kushanda, kuyera kwepamusoro kurongeka, kuita kwakagadzikana, kwakakwana. mabasa uye mamwe maitiro.Ichi chiridzwa yakakura electromechanical yekubatanidza bvunzo sisitimu, yakakwirira kuvimbika zvinodiwa, dhizaini yeakawanda kudzivirira sisitimu (software kuchengetedza uye kuchengetedzwa kwehardware), ita kuti sisitimu ive yakavimbika uye yakachengeteka.
Nguva yekutumira: Sep-22-2021